Fepetra ara-tsosialy - Ny Martsa Manerantany
Home » Fepetra ara-tsosialy
Ny maha-olombelona sy ny mpahay siansa Salvatore Puledda nanao ny 7 1989 Janoary any Florence, renivohitr'i maha olona: ara-tantara, ny hetra ho an'i Galileo Galilei, Giordano Bruno sy ny precursors ny siansa ankehitriny. Tamin'io fotoana io fanoloran-tena lasa hita eo mpandray anjara, ny ady-kevitra ho any amin'ny fampandrosoana ny siansa eo amin'ny fanompoana ny olombelona.
Avy tamin'io hetsika io no nipoiran'ny fandraisana andraikitra teto amin'izao tontolo izao tsy nisy ady mba hanatanterahana hetsika iray izay namoaka sy namaritra izany fanoloran-tena ho an'ireo antoko liana izany. Noforonina ny "Commitment Ethical" ary nisy ny hetsika notontosaina tao amin'ny University of Distance Education in Madrid izay nahitana profesora, mpampianatra ary mpianatra azy tamin'ny fiteny 10.
Isika dia eto amin'ity izao tontolo izao ity izay ahafahan'ny sasany mivarotra ny fahalalany sy ny fahalalany amin'ny tanjona rehetra amin'ny vidiny rehetra. Ireo no nanarona ny planetantsika tamin'ny milina mpamono maty. Ny hafa dia nampiasa ny fahaizany manokana mba hamorona fitaovana vaovao hanamboarana, fahanginana, ary hanamaivana ny feon'ny vahoaka sy ny vahoaka.
Izy ireo ihany koa ny lehilahy sy vehivavy izay efa nampiasa Siansa sy ny fahalalana mba hanamaivanana harerahana sy ny hanoanana, ny fanaintainana sy ny fijaliana ny olombelona mba hanaisotra ny gag avy amin'ny vavan'ny ny ory, mba hanome feo sy hanome toky azy.
Androany, amin'ny fiandohan'ny taonarivo fahatelo amin'ny West, ny tafavoaka velona ny olombelona manontolo dia karazana tandindomin-doza sy ny tany, ny trano iombonana, ny nofy ratsy ny tontolo iainana sy ny loza nokleary looms loza.
Noho izany, mangataka eto avokoa ireo mpahay siansa, mpikaroka, mpampianatra ary mpanabe eto amin'izao tontolo izao hampiasa ny fahalalany ho tombontsoan'ny olombelona.
Mampanantena aho (I mianiana) eo anoloan'ny namako, ny mpampianatra, ny fianakaviana sy ny mpiara-mianatra tsy ampiasaina amin'ny fiainako ho avy nahazo ny fahalalana sy ny fianarana ny mampahory olombelona, ​​fa hampihatra ny fanafahana.
Manolo-tena hiasa amin'ny fanafoanana ny fanaintainana ara-batana sy ny fijalian'ny saina aho.
Manolo-tena aho hampiroborobo ny fahalalahana eritreritra sy ny fianarana amin'ny fampiharana herisetra tsy mitady herisetra amin'ny fikatsahana "hitondra ny hafa tahaka izay tiako hoentina."
Ny fahalalana tsara dia mitondra mankany amin'ny fitsarana
Ny fahalalana tsara dia manakana ny fifandonana
Ny fahalalana tsara dia mitarika fifanakalozan-kevitra sy fampihavanana
Miantso avy eto ho any amin'ny anjerimanontolo rehetra, fikarohana ireo toeram-pampianarana, sekoly ambony, sekoly noho izany, mitovy etika fanoloran-Hippocrate no natao ho an'ny dokotera no ajoro mba hahazoana antoka fa fahalalana ampiasaina handresy ny fanaintainana sy ny fijaliana , hamono ny tany.